I-OnePlus 6T iya kuboniswa ngo-Okthobha 17 | I-Androidsis
I-OnePlus 6T yenye yeefowuni ekulindeleke ukuba ziwe. Inguqulelo entsha yesiphelo esiphakamileyo esenziwe yibhanti yaseTshayina kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo iza kufika kungekudala. Kwezi veki sifumana idatha engakumbi nangaphezulu malunga nomnxeba, nangona umhla wokunikezelwa kwayo uhlala uyimfihlakalo. Kodwa oku kubonakala ngathi sele kutshintshile, enkosi kwinkampani.
Ibi Enkosi kwisibhengezo senqaku elitsha elibizwa ngokuba yiScreen Unlock, ukuba sikwazile ukubona ukuba ngowuphi umhla wokuboniswa kwale OnePlus 6T. Kubonakala ngathi asizukuhlala silinde ixesha elide ukubona oku. Ngaphezulu nje kwenyanga.
Ukusukela enkosi kulo mfanekiso ulungisiweyo kwifemu, oko kuthetha ukuba Ngo-Okthobha i-17, i-OnePlus 6T iya kuziswa ngokusemthethweni. Ngokomgaqo, sisikrini esingabalulekanga, kodwa ubukho balo mhla kunye nekhalenda yokukhutshwa kwangaphambili kwenkampani, bacebisa ukuba kubalulekile.
Iimodeli zangaphambili bezisoloko zivezwa iinyanga ezintlanu emva kweyokuqala. I-OnePlus 6 iboniswe ngoMeyi 16, ke inyani yokuba le modeli intsha iboniswe ngo-Okthobha u-17 ayiqhelekanga. Kuba iinyanga ezintlanu sele zidlulile phakathi kwenye nenye.
Kwelinye icala, sele sinedatha yomsebenzi omtsha wale OnePlus 6T. Eyokuqala kukuba isiphelo esiphakamileyo siya kuba nayo isivamvo somnwe esakhelwe kwiscreen sakho, Oko kulandela imeko esiyibonayo kwimarike, ebonakala ngathi isebenzisa lo msebenzi mtsha weScreen Unlock oboniswe namhlanje.
Ngoko ke, Sele sinomhla esinokulindela ukuba i-OnePlus 6T iboniswe ngayo. Kungenzeka ukuba sifumane iinkcukacha ezithe kratya malunga noluhlu kwiiveki ezizayo. Siyathemba ukuba inkampani iyakuqinisekisa ngokusemthethweni lo mhla wokufayilisha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » I-OnePlus 6T inokuboniswa ngo-Okthobha u-17
Isicelo esimangalisayo samanqaku e-Android !!